दुबारगाउँका पहिरोपीडितलाई लमजुङ परिवार दक्षिण कोरियाको २५ हजार राहत सहयोग – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७७, १ कार्तिक शनिबार ०९:०६
लमजुङ परिवार दक्षिण कोरियाले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका ८, दुबार गाउँका पहिरोपीडितका लागि राहत सहयोग गरेको छ ।
राहत सहयोग रकम शुक्रबार दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । लमजुङ परिवार दक्षिण कोरियाले पठाएको २५ हजार रुपैयाँ नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखा अध्यक्ष आश गुरुङले गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । महासंघका अध्यक्ष गुरुङले गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङलाई उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले राहत सहयोग रकम पीडितसामु पु¥याइने बताउनुभयो । गत बर्खायाममा गाउँमा पहिरो चल्नुका साथै जमीन भासिएपछि दुवार गाउँका स्थानीय समस्यामा परेका छन् । उनीहरुलाई राहत स्वरुप दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले राहत रकम संकलन गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले राहत सहयोगका लागि लमजुङ परिवार दक्षिण कोरिया र कोरियामा रहेका लमजुङे साथै नेपालीलाई धन्यावाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
लमजुङ परिवार दक्षिण कोरियाले यसअघि मध्यनेपाल नगरपालिका ६, लामासोती, भदौरे, पुरानडिही, गुम्बाबेंसीका पहिरो पीडितका लागि ६५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
लमजुङ परिवार दक्षिण कोरियाले मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ५, तल्लो चिप्ला घर भइ हाल वडा नं. ४, च्याम्चेमा बस्दै आएका रक्त क्यान्सर पीडित १५ बर्षीय विकाशल विकलाई पनि सहयोग गरेको छ । बालकको उपचारको लागि ४१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको परिवारका अध्यक्ष राजकुमार गुरुङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मध्यनेपालका पहिरोपीडित र क्यान्सरपीडित बालकलाई संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष मेख दुराले राहत रकम हस्तान्तरण गर्नुभ्एको हो ।
अध्यक्ष गुरुङले विभिन्न किसिमका दुःख, पीडामा परेका तथा बिरामी असहायलाई सामूहिक प्रयोसबाट सहयोग गरिएको बताउनुभयो । विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो पीडालाई एकारित राखेर जन्मभूमि र जन्मभूमिमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति माया झल्काएर पीडितलाई सहयोग गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।